सगरमाथा इन्सुरेन्सले पुस २१ मा एजीएम, के-के एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सगरमाथा इन्सुरेन्सले पुस २१ मा एजीएम, के-के एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै ?
काठमाडौं - पुस २१ गते सगरमाथा इन्सुरेन्सले साधारण सभा गर्ने भएको छ । इन्सुरेन्सले यसपालि लगानीकर्तालाई लाभांश भने नदिने भएको छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा संशोधन गरी अधिकृत तथा जारी पुँजी वृद्धि गर्नेलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएर साधारण सभा बोलाइएको छ । सगरमाथाले अधिकृत पुँजी १ अर्ब ५० करोडबाट बढाएर २ अर्ब पुर्याउने र जारी पुँजी १ अर्बबाट वृद्धि गरी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने विशेष प्रस्ताव गर्दैछ । तर लाभांश सम्बन्धी भने कुनै प्रस्ताव गरिएको छैन ।
सभा गर्न कम्पनीले पुस ७ देखि पुस २१ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको छ । हाल सगरमाथाको चुक्ता पुँजी ५३ करोड ८२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ छ । सगरमाथालाई बिमा समितिले तोकेको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन अझै ४६ करोड १७ लाख ८ हजार रुपैयाँ आवश्यक छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ४७ रुपैयाँ ४८ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २३६ रुपैयाँ ६२ पैसा छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यो इन्सुरेन्सले ३ करोड २६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।